I-Arcan, uhlaka lokudala izindawo ze-GUI nedeskithophu | Kusuka kuLinux
Ngemuva kweminyaka engaphezudlwana kwengu-4 kusukela kushicilelwe inguqulo yokugcina ebalulekile, kwazisile muva nje ukukhishwa kwenguqulo entsha yenjini yedeskithophu ye-Arcan 0.6.0, ehlanganisa iseva yokubonisa, uhlaka lwe-multimedia nenjini yomdlalo ukucubungula imidwebo ye-3D.
I-Arcan ingasetshenziselwa ukudala izinhlelo ezahlukahlukene zehluzokusuka kuzikhombisi zomsebenzisi zezinhlelo zokusebenza ezishumekiwe ziye ezindaweni ezimele zedeskithophu.
I-Safespaces ideskithophu enezinhlangothi ezintathu yezinhlelo zangempela ezingokoqobo kanye nemvelo yedeskithophu IDurden nayo iyakhiwa ngokuya nge-Arcan . Ikhodi yephrojekthi ibhalwe ngo-C futhi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-BSD (ezinye izingxenye ezingaphansi kwe-GPLv2 + ne-LGPL).
1 Mayelana ne-Arcan
2 Mayelana nenguqulo entsha ye-Arcan 0.6.0
I-Arcan ayiboshelwe ohlelweni olungaphansi lwehluzo y ingasebenza ezindaweni ezahlukahlukene zohlelo (I-BSD, i-Linux, i-MacOS, iWindows) isebenzisa iziphetho ezingemuva ezi-pluggable.
Ngalokho i-Arcan inhlanganisela enelukuluku yokwazi ukusakaza imithombo yeprosesa, injini yomdlalo neseva yokubonisa Ngomklamo wenoveli ofaneleka kahle kumaphrojekthi wehluzo lesikhathi sangempela eliyinkimbinkimbi futhi elilula ngokufana, futhi lihlangana kahle nanoma yini kusuka ku-interface yomsebenzisi we-sci-fi kuya kuphrojekthi ethile edidiyelwe yasekhaya. kumadeski agcwele.
Kuyinto modular kakhulu, Inokuncika okumbalwa, kepha iza nawo wonke amabhethri adingekayo afakiwe.
Isibonelo, kungenzeka ukusebenzisa i-Xorg, egl-dri, libsdl ne-AGP (GL / GLES). Iseva yokubonisa ye-Arcan ingasebenzisa izinhlelo zeklayenti le-X, Wayland ne-SDL2. Ukuphepha, ukusebenza kanye nokulungisa iphutha kucashunwe njengezindlela zokuklama eziyinhloko ze-Arcan API. Ukwenza lula ukuthuthukiswa kwesixhumi esibonakalayo, kuhlongozwa ukusebenzisa ulimi lwesiLua.
Ngaphakathi yezici ezivelele ku-Arcan, singathola okulandelayo:
Ukuhlanganiswa kweseva eyinhlanganisela, ukubonisa izindima nezindima zemenenja yewindi
Uhlaka lwe-multimedia olwakhelwe ngaphakathi olunikeza amathuluzi wokusebenza ngehluzo, ukugqwayiza, ukucubungula ukusakazwa kwevidiyo nokusakazwa komsindo, ukulanda izithombe, nokusebenza namadivayisi wokuthwebula ividiyo.
Imodeli enemicu eminingi yokuxhuma abashayeli bemithombo yedatha enamandla, kusuka ekusakazweni kwevidiyo kuye kokukhishwa kohlelo ngakunye.
Imodeli eqinile yokwabelana ngamalungelo. Izakhi zenjini zihlukaniswe ngezinqubo ezincane ezingenamiphumela ezihlangana ngesikhombimsebenzisi esabiwe sememori shmif.
Amathuluzi wokuqapha kanye nokuhlaziya okwakhelwe ngaphakathi, kufaka phakathi injini, angenza isimo se-Lua script sangaphakathi senze lula ukulungisa iphutha.
Umsebenzi wesipele, okuthi uma wehluleka ngenxa yephutha lohlelo, ungaqala uhlelo lokusebenza lokusekelayo, ugcine imithombo efanayo yedatha yangaphandle nokuxhumeka
Amathuluzi wokwabelana athuthukile ongawasebenzisa ukurekhoda noma ukusakaza okuncane okuvela emithonjeni yevidiyo nomsindo ngenkathi usebenzisa ukwabelana kwedeskithophu.
Mayelana nenguqulo entsha ye-Arcan 0.6.0
Kule nguqulo entsha abathuthukisi basho ukuthi okugxilwe kukho kube ekubonakaleni kwenethiwekhi.
Inguqulo yokuqala yesiphakeli sokuqhafaza se- "arcan-net" iphakanyisiwe, evumela ukuhlela umsebenzi wokude kunethiwekhi usebenzisa umthetho olandelwayo we-A12.
Ukuqondiswa kabusha kweklayenti lesitayela se-X11 kuyasekelwa nokufinyelela okukude kwedeskithophu njengakwi-RFB / RDP / SPICE, kanye nokusakazwa kokufaka, ukusakazwa komsindo nevidiyo, ukufinyelela okwabiwe, ukufuduka kwamakhasimende okubukhoma nokuhlukahlukene.
Idatha yevidiyo edlulisiwe, kuya ngezinhlobo zamawindi, icindezelwa kusetshenziswa ama-codec alahlekile nalahlekayo.
Ngokubethela kwesiteshi okuqinisekisiwe Ukuxhumana, Iphakethe le-X25519 + Chacha8 + Blake3 liyasetshenziswa.
Olunye ushintsho lubandakanya:
Amathuluzi wokulungisa amaphutha umsebenzi wamakhasimende.
Ikhonsoli yesitayela se-KMSCon / FBCon.
Amandla okuboleka kuzinhlelo zokusebenza abanye abashayeli abenzelwe umphathi wewindi.
Ukuqaliswa komshayeli wedivayisi yokulandela iso leTobii 4C.
Ukusekelwa kwe-XWayland Client Isolate.
Ingxenye ye-Arcan-trayicon yokubeka izithonjana kuthileyi wesistimu.
Ukusekelwa kwama-synthesizers enkulumo.
Ukuhlelwa kabusha kwemodi yokusebenza kumasistimu angenabaqaphi (angenakhanda).
Ekugcineni, uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungabheka imininingwane ku- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Arcan, uhlaka lokudala izindawo ze-GUI nedeskithophu